साझा पार्टीबाट बाहिरिए सूर्यराज र मुमाराम - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः साझा पार्टीका सचिवालय सदस्य डा. सूर्यराज आचार्य र मुमाराम खनालले पार्टी छोडेका छन् ।
फुटको डेढ वर्षपछि साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दल फेरि एकता गर्ने प्रयासमा जुटेपछि त्यसमा असहमति जनाउँदै उनीहरूले पार्टी छोडेका छन् ।
साझा पार्टीको आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी एकताका लागि सम्वाद समिति गठन गरेको छ । साथै आचार्य र खनाललाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार लुम्बिनी भेलामा फरक मत राखेका खनाल र आचार्यले पार्टीको संरचना भत्काएर संयोजक मात्र राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर पार्टी नेतृत्व अहिलेको संरचना कायम राख्दै एकता गर्दै जाने पक्षमा उभिएपछि उनीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
असार २६ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका समितिहरू भंग गरेर जान ठिक नहुने र विवेकशीललगायतका दलहरूसँग एकीकरण अगाडि बढाउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएपछि आचाय–खनालले पुरानै पार्टीसँग मिलेर जानुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै पार्टीबाट बाहिरिएका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस सरकारमा ‘आसेपास–पुँजीवाद’ को राष्ट्रघाति तस्विर देखिँदैछः साझा पार्टी
११ साउन २०७४ मा पनि पार्टी एकता गरेका साझा र विवेकशील २७ पुस २०७५ मा फुटेको थियो ।
ट्याग्स: डा. सूर्यराज आचार्य, मुमाराम खनाल, विवेकशील नेपाली दल, साझा पार्टी